Isidlo seScardale-Yonke into ekufuneka uyazi !! | Ukutya kukaNutri
Ukutya kweScardale luhlobo lokutya okunciphisayo okubonakaliswa ngu ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza okukhulu, ngenxa yokungeniswa kweekhalori ezimbalwa. Enye yezona ndlela zindala zokutya okoko zadalwa zalungiswa ngu Ugqirha Herman Tarnower ngo-1970 kwaye yapapashwa ngo-1978. Nangona kunjalo nangaphandle kweminyaka, iyaqhubeka injalo ukwamkelwa okuninzi ngabo bathatha isigqibo sokunciphisa ubunzima ngexesha elifutshane kakhulu.
Ukutya kweScardale kusekwe kumbono wokudibanisa iiproteni, ii-carbohydrate kunye namafutha, kula manqanaba alandelayo ekutyeni kwalo naluphi na usuku: i-43% yeeproteni, i-22,5% yeoyile kunye ne-34,5% yeecarbohydrate. Kwiminyaka 70 kunye ne80 Oku kutya kwamkelwa ngokubanzi sisininzi, ngenxa yomngcipheko obandakanyekayo ekulandeleni ukutya okuneproteni ephezulu kakhulu babengaziwa kwaphela.
Kude kube namhla, akukhuthazwa ukuba ulandele ukutya okuneeprotein, ngenxa yomonakalo onokuthi wenzeke ubunzima kwizintso kunye nokuba nokwenzeka kwesifo esiqhelekileyo samathambo njenge-osteoporosis. Nokuba ngoo-70, ngenxa yomonakalo wexesha elide, iingcali zezondlo zicebisa ukuba zingabalandeli ngaphezulu kweeveki ezimbini zilandelelana.
Ngokweziseko zokutya, umntu ogqiba ukukwenza unokulahleka malunga ne-400 grams ngosuku. Kukho ukutya oku-3 kuphela ngosuku, ukuphelisa isidlo sasemini kunye nokutya. Isiseko sokutya sineziqhamo, imifuno kunye nenyama engenamafutha. Ukuba kukutya iphezulu kakhulu kwiprotheni, umntu wanelisekile ngokupheleleyo kwaye kunqabile ukuba ashiye elambile. Eyona ngxaki iphambili koku kutya kwaye njengoko ihlala isenzeka uninzi lwezinto ekuthiwa kukutya okungummangaliso ukuthintela ukutya okuninzi eziyimfuneko kuphuhliso olufanelekileyo lomzimba.
Olunye uphawu lokutya kweScardale kukuba icebisa ukusela ubuncinci malunga neeglasi ezi-4 zamanzi ngosuku Nangona kungekho mda kwaye into ekucetyiswayo iya kuba ziiglasi eziyi-8 okanye iilitha ezimbini zamanzi. Ukufunxa ulwelo kuluncedo olukhulu emzimbeni njengoko kunceda ukuphelisa iityhefu kunye nelahleko yamafutha aqokelelweyo.
1 Uhlobo lwemenyu yokutya ye-Scardale
2 Ukuthintelwa kunye nokutya okuvumelekileyo kwisidlo seScardale
3 Izibonelelo zokutya kweScardale
4 Ukutsalwa kukutya kweScardale
5 Ividiyo malunga nokutya kweScardale
Uhlobo lwemenyu yokutya ye-Scardale
Emva koko ndiza kukubonisa ukuba ingaba yintoni imenyu eqhelekileyo yemihla ngemihla kwisondlo seScardale. Njengoko benditshilo ngaphambili kolu hlobo lokutya kukho kuphela Ukutya oku-3 ngosuku: Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa.
Isidlo sakusasa ibiya kuba sisiqingatha se-grapefruit okanye isiqhamo esithile sonyaka, isilayi sesonka sengqolowa sigcwele kungekho nto kwaye ikofu okanye iti ngaphandle kweswekile.
Ekutyeni ungathatha inkukhu eyosiweyo Kunye nesaladi enxibe ngecephe leoli yeoli. Unganaso isiqwenga sesiqhamo Amaxesha ama-4 ngeveki.
Kwimeko yesidlo sangokuhlwa unokukhetha intlanzi engenamafutha amaninzi, ezinye Imifuno eyosiweyo okanye etshisiweyo kwaye ubapheleke ngecephe leoli yeoli.
Ukuthintelwa kunye nokutya okuvumelekileyo kwisidlo seScardale
Ukwenza icace gca kuwe ukuba yeyiphi indlela yokutya yeScardale, ndiza kudwelisa apha ngezantsi ukuba ziyintoni Ukutya okungavumelekanga okanye awunakuthatha nangayiphi na imeko kwaye ezo ungazitya ngaphandle kwengxaki kwaye zivunyelwe.
Ukutya okungavumelekanga kwisidlo seScardale zezo zivela Umxholo wesitashi esiphezulu ezinje ngeetapile, ukutya okunamafutha ongezelelweyo afana nebhotolo okanye cream, uninzi lweemveliso zobisi, iijusi yeziqhamo, utywala, iilekese okanye iimveliso zedicicatessen
Ewe ukutya okuvunyelweyo Kwaye ukuba ungadibanisa nokutya ngaphandle kwengxaki, kukho imifuno enje ngeminqathe, ukhukhamba, iitumato, isipinatshi okanye ibroccoli. Ungasebenzisa izinto eziswiti endaweni yeswekile kunye neviniga okanye iziqholo zinokufakwa kwizinxibo. Ngokubhekisele ekutyeni iiprotein, unokuba nenyama okanye intlanzi kodwa kufanelekile ngaphandle kwamafutha.
Izibonelelo zokutya kweScardale
Ukutya okungummangaliso kuhlala kunabo Izinto ezilungileyo nezimbi kwaye abantu ababakhuselayo kunye nabanye abagxekayo, kuya kwenzeka okufanayo nokutya kweScardale. Ukuze ube nokwaziswa ngokupheleleyo ngaphambi kokuqala ukutya kweScardale, apha ngezantsi ndiza kuthetha ngothotho lwezibonelelo okanye izibonelelo ezilolu hlobo lokutya ezinokukuzisela zona.
Kukutya oya kukufumana iziphumo ezilungileyo ngexesha elifutshane kakhulu. Ukuba ufuna ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza, kukutya okufanelekileyo okulandelayo.
Ngokubandakanya ukutya okwenziwe ngothotho lokutya okuthile, Akunyanzelekanga ukuba uhambe uphambene ubala iikhalori zemveliso nganye okanye ubone ukuba ukutya okutyayo kuninzi kangakanani.
Akudingeki ukuba yongezwe ngayo nayiphi na uhlobo lokuzilolonga okanye ukwenza umthamboUkuba ulandela izikhokelo ezibekiweyo kukutya, uya kuphulukana neekilos ozibekileyo.
Ukutsalwa kukutya kweScardale
Njengoko kuqhele ukwenzeka kolu hlobo lokutya, ukutya oza kukulandela ayilungelelananga konke konke kwaye umzimba awuzifumani zonke izakha-mzimba ezifunekayo ukuze usebenze ngokugqibeleleyo.
Isidlo sakusasa ayiboneleli ngezakha mzimba okanye amandla awaneleyo ukuqala usuku.
Ngokubandakanya izidlo ezi-3 kuphela ngosuku, unokufumana amandla, ubuthathaka okanye ndilambile.
Ngokwezinye iingcali zesondlo, oku kutya akufuneki kwandiswe ixesha elide njengoko kunokubangela iingxaki zempilo ezinje ukwanda kwe-uric acid okanye ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Ukongeza koku, izintso zingonakaliswa kakhulu okanye zenzakaliswe.
Nangona imithambo yomzimba isempilweni emzimbeni, ayikhuthazwa, ngenxa ukungabikho kwezondlo kunye neekhalori ezimbalwa ezisetyenzisiweyo imini yonke.
Kwimeko apho uthatha isigqibo sokuqalisa ukutya kwe-Scardale kubalulekile ukuba ngaphambili thetha nogqirha wosapho ukukucebisa ukuba ngaba kungabeka naluphi na uhlobo lomngcipheko kwimpilo yakho.
Ividiyo malunga nokutya kweScardale
Emva koko ndiyakushiya ividiyo echazayo malunga nokutya kweScardale ukuze ufunde okungakumbi malunga nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Ukutya kweScardale
Zintathu izinto ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokungalawulwa lilanga